Polona: Fahoriana lalina tany anaty aterineto taorian’ny 10.04.2010 · Global Voices teny Malagasy
Polona: Fahoriana lalina tany anaty aterineto taorian'ny 10.04.2010
Voadika ny 22 Avrily 2010 16:51 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, Français, English
Manomboka herinandro fisaoanana i Polona tamin’ny nahafatesan'ny Filoha Poloney sy olona 95 hafa taorian‘ny fianjeran’ny fiaramanidina omaly tany amin'ny faritr'i Smolensk ao Rosia. Samy nanova ny loko lafiky ny tranonkalany lokon-davenona, mainty ary fotsy ny vavahadin'izy ireo avy ireo mpilaza vaovao amin'ny aterineto, ireo mpilaza vaovao ara-tsosialy, ireo tranonkalan'ny governemanta ary ny vavahadin'ny tranonkalan'ireo fikambanana Poloney erak'izao tontolo izao koa dia mba nanova ny loko lafiky ny tranonkalany lokon-davenona, mainty ary fotsy ho fanehoan'izy ireo ny fiaraha-miory amin'ny firenena.
Nanisy ribà mainty tamin'ny tranonkalany ny Google.pl, arahin'ireto teny ireto:
Ho fahatsiarovana ny filohan'ny Repoblikan'i Polona, Lech Kaczyński, sy ireo niharam-boina rehetra.
Ireo atidoha-milina Poloney fikarohana , Wirtualna Polska sy Onet.pl dia nanova ny sary famantarana azy ireo :
Mainty sy fotsy ankehitriny ny vavahadin’ny Tranonkala Gazeta.pl ao Polona, maneho ny sarin'ny filoha mivady, ary nasiny ribà mainty tamin'ny sary famantarana azy:
Naneho sary famantarana mainty koa ny blaogy Blox.pl ankehitriny:
Toy izany koa ny an'ireo tranonkalam-pilazam-baovao: Blip, Flaker, Wykop ary Nasza-Klasa:
Ireo Trano fampielezam-peo, toy ny RMF FM [PL], dia nanova ny fandaharam-potoanany nandritra ity herinandro ity, nandefa onjam-peo somary mitoreoreo ary nandrisika ny mpihaino mba handefa ny fitsapana alahelo amin’ny aterineto.
Nesorina avokoa ny loko hafa rehetra tamin’ny vavahadin’ny tranonkala fampiasan’ny fanjakana ankoatra ny mainty sy fotsy. Prezydent.pl – izay vavahady natokana ho an’ny filoha irery ihany, dia nandefa ny sarin’izy mivady – ary sombin-tononkalon’i Zbigniew Herbert:
…ary nampipololotra ny zavony ny alan’i Katyń …
Nandefa fiaraha-miory ny masoivoho sy ny kaonsila-n’i Polona. Nanova ny endri-pamantarana azy ny tranonkalany ny konsilan’i Polona any New York:
Maneho ny fiaraha-mioriny ihany koa ireo Ivontoerana Poloney maneran-tany. Nanova ny marika famantarana ny tranonkalany ny sampana ara-koltoraly Poloney any Londra ary nanisy ity soratra ity:
Miaraka amin’ny fo feno dia feno no isaonanany ny fahafatesan’ny filoham-pirenenay, Mr. Lech Kaczynski, niaraka tamin’ny vady andefimandriny ary ireo olom-panjakana maro izay niara-levona taminy.
Araka ny fanapahan-kevitry ny fiadidiam-panjakana, samy hanokana ho herinandrom-pisaonana avokoa ny ambaratongam-pitondrana rehetra ho fanomezam-boninahitra ireo olo-mangam-pirenena nafointsika. Vokatr’izany, nahantona avokoa ireo fihetsiketsehana maro samihafa nokasain'ny Ivontoerana Koltoraly Poloney hatao ary nofoanana mihitsy aza raha toa ka tsy mety ny hanemorana azy. Na dia goavana aza ny fanelingelenana entin’izany, mino izahay fa hiara-ory aminay ianareo manoloana izao fahatsiarovana ireo aina nandao antsika izao.
Raha tany Polona nividy ribà mainty sy saina Poloney ary manofahofa izany sahady ny olona, ny maro tamin'ny mpampiasa ireo media ara-tsosialy dia naneho ny firaisankinany tamin'ny fanampiana ‘Poland’ Twibbon tamin'ny avatars-n'izy ireo, asdy nanova ny sarin’ny avatar-n’izy ireo; ireo ambany ireo ny ohatra avy amin’ny tranonkkala ara-tsosialy Nasza-Klasa [PL]:
Nandefa fanazavana mikasika ny vesatry ny krizy misy ankehitriny ny blaogy Poloney iray avy any London, the Polski blog [PL]:
Ny fiheverana fa hoe iny loza mahatsiravina iny dia tandindon'ny [zava-nitranga tamin'ny Martsa 1940] dia tena fihodinana mangirifiry sy mahamenatra eo amin'ny tantara sady kapoka mafy ho an’ny firenena iray izay vao avy nibaby henatra sy nisedra ny hirifiry ampolotaona teo ho eo. Izany dia tsy hijerena izay met ho hevitry nyolona momba ny filoha, izay mivoy politika conservative sy feno fifanoheran-kevitra manjary mahatonga ny fiaraha-monina hisy tendro roa.
Hiatrika fotoana sarotra i Polona amin’ny fanarenana indray ny rafi-pitondrany. Hipetraka ny fanontaniana mikasika ny loza nitranga, mikasika ny politikan'ny fandriampahalemana, mikasika izay ho dingana manaraka. Saingy manantena fotsiny aho fa amin’ity indray mitoraka ity dia mba hanana fomba fijery matotra kokoa tsy mizarazara momba ireny olana ireny i Polona.
Amin’izao fotoana izao, na ahoana na ahoana, dia misaona aloha i Polona , na anaty aterneto izany na virtoaly. Hatramin’ny zoma, isika, Poloney, dia hamaky vaovao, hanaraka vaovao sy ireo fanambarana ofisialy ary hifampiresaka ao anaty loko lafika volon-davenona, mainty sy mena mibahana toerana eo amin'ny aterineto poloney.
Tantaran'ny Polonina farany
Belarosia 16 Novambra 2021
Azia Atsimo 03 Avrily 2021